Home विशेष लेख धरानमा एडिवी परीयोजना बारे भ्रम र यथार्त
एशियाली विकाश वैकको अनुदान तथा क्रृण सहयोगमा धरानमा एकिकिृत शहरी विकाश परीयोजना अन्तर्गत झण्डै २ अर्व रुपैयाको लागतमा खानेपानी को काम शुरु भएको पनि एक वर्ष वढि भयो । २०१३ देखि शुरु भई २०१७ मा परियोजना सम्पन्न गरी धरानका सबै घरमा चौविसै घण्टा स्वच्छ, सफा मिनिरल वाटर सोसरह पानी खुवाउने त्यो प्रोजेक्टको योजना छ । तर योजना शुरु भएको एक वर्ष वितिसके पछि धरानका केही मान्छेहरु र राजनितिक दलहरुले यो योजना खर्चिलो छ, पानी चतराबाट ल्याउनु पर्छ योजनामा भ्रष्टचारको गन्ध आउछ, पारदर्शी भएन भन्ने जस्ता तर्कहरु अघि सारेर विरोधका स्वरहरु उठाईरहेका छन । । जनसरोकार मन्च नामक संस्थाले त यो विषयलाई १ नम्बरमा राखेर हप्तै पिच्छे एडिवीको मुख्य कार्यालय मनिला देखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, अदालत , अख्तियारको कार्यालयसम्म उजुरीको विट्टो पठाउने ठेक्का नै पाए जस्तो छ । तर गणतन्त्रमा यस्ता ठूलो परियोजना प्रति जनाताहरुले देखाएको चासो र चिन्तालाई भने स्वाभाविक प्रकृया नै मान्न पर्छ । हिजोको जस्तो सुतेर बस्ने बेला पनि होइन यो । नगरवासीको लागि आएको परियोजना वारे नगरबासी अनभिज्ञ रहनु, कार्यक्रममा सहभागी नहुनु भनेको राम्रो कुरा पनि होईन । बरु जनताको तर्फबाट एउटा स्वतन्त्र अनुगमन कमिटी गठन गरेर पनि कामलाई अनुगमन र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ।
तर यहा“ नागरिक समाज र राजनीतिक दलको नाममा परीयोजना वारे उठने गरेका केही सवालहरु भने केटाकेटी शैलीका, अप्राविधिक, कसै प्रति प्रतिशोध साध्ने हिसावका देखिन आएको र तिनै कुराहरुलाई सुनियोजित ढंगवाट व्यापक प्रचार प्रसारमा आएर नगरबासीमा भ्रम श्रृजना हुन थालेकोले यथार्तमा कुरा केहो त भन्ने वारे यो पंतिmकारलाई प्राप्त जानकारीको आधारमा केही भ्रम चिर्ने कोशिश गरेको छु ।
स्वास्थ्य ठूलो की धन ?
धरान कै ईतिहासमा २ अर्व धनराशी को ठूलो परियोजना पहिलो पटक शुरु हुदैछ । त्यसैले गर्दा केही मानिसहरु अत्तालिएका,े दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ । उनीहरु यो योजना महंगो भयो , कहा“बाट ऋण तिर्ने जस्ता तर्क गरिरहेका छन् । तर यसको योजना लाई राम्ररी अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने यो अहिलेको पानीको अभावमा नगरबासीले खेपेको सास्त्ीि, स्वास्थ्य र अनावश्यकरुपमा गर्नु परीरहेृको खर्चको अनुपातमा रत्ति पनि महंगो र ठूलो हैन् ।
कुनै पनि नया“ परियोजनाले नगरमा पु¥याउने सुबिधालाई आर्थिक दृष्टिले मात्र मुल्यांकन गरीनु सरासर गलत प्रकृया हुन जान्छ । यसको फाईदा भनेको सिंगो नगरवासीको सर्वाङ्गीण विकाशमा पर्न जान्छ । हामी हाम्रो शहरलाई सुन्दर, सफा शहर भन्छौं तर त्यही शहरमा पानी छैन भने कसरी हुन्छ सुन्दर सफा शहर ? जुन शहरको वासिन्दा स्वस्थ्य सफा रहदैन तव सम्म त्यो शहरको सर्वाङ्गीण विकाश हुन सक्दैन । किन भने अस्वस्थ्य नगरवासीले कसरी व्यक्तित्व विकाश गर्न सक्छ । कसरी नगर विकास गर्न सक्छ ? स्वच्छ रहन उसले प्रयाप्त स्वच्छ पानी पाउनु आवश्यक छ ।
अहिले धरानमा झण्डै १ लाख मानिस बसोवास गर्छन । हरेक मानिस वर्षमा सरदर १० पटक दूषित पानी कै कारण विरामी पर्ने गरेको तथ्यांक छ । त्यस बाहेक जण्डिस, मुटु, फोक्सो सुनिन्ने पानीजन्य जटिल रोग लागेमा हुने खर्चको वजेट अझ धेरै हुन्छ । यसरी हेर्दा एक व्यक्तीलाई पानीको कारणले उत्पन्न रोग निवारण गर्न प्रति वर्ष सरदर १० हजार खर्च लाग्ने गर्छ एक लाख नगरवासीमा प्रति व्यक्ति १० हजार खर्च हुदा १ अर्ब रुपैया खर्च लाग्ने गर्छ । जसको हिसाब किताब हामीले कहिल्यै राखेका हुदैनौ । त्यो खर्च प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यक्तीगत, सामुहिक, सरकारको ढुकुटीबाट जाने गर्दछ । त्यो औषधी खर्चको बाहेक व्यक्तिको मुल्य अझ महंगो चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यस विषयमा गम्भीर हुने की नहुने ?
खर्चकै हिसाव गर्दा पनि धरानले मात्र धरानवाहिरवाट प्रति दिन झण्डै दुई लाखको मिनिरल वाटर, र टयाडकर वाट पानी झिकाउने गर्दछौ । त्यसबाहेक पानीको अभावले नगरको औधोगिक, व्यापारिक पर्यटकीय विकाशमा करौडौको को घाटा सहनु परेको छ । जग्गा जमिनले मुल्य पाएको छैन । पानीको निहुमा हुने दैनिक झैं झगडाले, पारिवारिक र घरेलु सद्भाव विथोलिएर सामाजिक द्धन्द निम्त्याउने गर्दछ । हाम्रो गाउ“घरमा अंधिकाश झगडाको उत्पती पानी र पानीको धारा, पधेरोबाट हुने गर्दछ । त्यो द्धन्द विस्तारै बढेर गाउ“÷गा“उ जाती सम्प्रदाय बीच फैलिएको कयौं उदाहरणहरु छन् । भनिन्छ अब तेश्रो विश्वयुद्ध भएमा केवल पानीको निहुंमा हुनेछ किनकी जलवायु परीवर्तनका कारण विश्व वास्पिकरणले मुहानहरु सुक्ने क्रम जारी छ । नेपालमा नै अब पानीको मुहान विक्री गर्ने चलन शरु भई सकेको छ । यि यस्ता तथ्यहरु त हामीले दैनिकी भोग्दै आएको अनुभवलाई विचार गर्दा पनि पानीको गुणोत्तरी बृद्धिमा गरिने कुनै पनि लगानी रतिभर खेर जाने देखिदैन । खेर नजाने भए पछि पैसाकाृे खोचे थापेर परियोजना विथोल्न खोज्नु ,फिर्ता गर्न खोज्नु कतिको न्याय संगत छ ? यस वारे नगरवासीले अव मौन बस्नु र दुई जिव्रे हुनुहुदैन वरु छिटो स्वतन्न्त्र प्रतिकृया दिने बेला भएको छ । अन्यथा धमिलो पानीमा माछा मार्ने सिपालु मानिसहरुको झुण्डले यस्ता परीयोजना तुहाउन अनेक प्रयास नगर्ला भन्न सकिन्न । जसरी अरुण तेश्रो तुहाउन केहि नेता पार्टि, सचारकर्मी र माफियाहरु सुनियोजित ढंगले लागेका थिए । जसको परीणाम आज हामी दिनरात लोडसेढिडको मारमा पिल्सिनु परीरहेको छौ ।
के छ एडीबी को परियोजनामा ?
धरानका केही संघसंस्था, राजनितिक दल, नगरपालिका र काठमाण्डौंमा बस्ने धरानेहरुको सकृयता र हारगुहारबाट एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानलाई धरानको खानेपानी योजनाको लागि ल्याउन सफल भएको हो । तर धरानकै केही व्यक्ति संघसंस्थाका मानिस र केही संचारकर्मीहरु भित्रै पनि एडिबीको ऋण सहयोगलाई खाली नकारात्मक दृष्टिीले हेरेको पाईयो । खासगरी एडीबीलाई सौताको रुपमा हेर्ने नेपाल खानेपानी संस्थान धरानका हाकिम र कर्मचारीहरुले एडीबी नाफा हुने स्थानमा मात्र लगानी गर्छ, व्यापार गर्न आएको यसले पानी महंगोमा बेच्छ भन्ने जस्ता झुटका खेती र भ्रम फिजाउने काम गरि रहेका छन् । तर यी भ्रम फैलाउनेहरुलाई यो पंक्तिकारको एउटा प्रश्न छ । हाम्रो देशमा कुन त्यस्तो बैंक छ जसले २ रुपैया ऋण दिदा १ रुपैया मिनाह गर्छ ? मिनाह त होइन बरु २ रुपैया को ब्याज“मा स्याज पनि थपेर खेतबारी उडाइदिने गरेको छ । तर एडीबी ले धरानको एकिकृत शहरी विकास परियोजनाको लागि भनेर २ अर्ब रुपैया ऋण सहयोगमा र १ अर्ब रुपैया अनुदान दिएको छ । जसको पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन । बाकी १ अर्बको पनि बार्षिक ५ प्रतिशतको सस्तो व्याज दरले ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्यो १ अर्ब ऋण पन् िपरियोजना राम्ररी सम्पन्न भएर उदाहरणिय बन्न सक्यो भने मिनाह गर्न सक्ने धेरै संभावना रहेको बैक सुत्रहरु वताउछन् । जसका लाई हाम्रा नव नियुतm सभासदहरुले सम्वन्धीत निकायहरुमा कुरा पनि चलाई सकेका छन । किन भने नेपाल गरिब मुलुकमा पर्ने भएकोले शिक्षा, स्वास्थ्य , खानेपानी, सर सफाई, वातावरण संरक्षण जस्ता शिर्षकहरुमा दिएका ऋणहरु एडीबी विश्व बैकहरु जस्ता दाताहरुले मिनाह गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु पाइएको छ । परियोजना संचालन, कार्यविधी निर्माणमा पनि एडीबीको कुनै हस्तक्षेप वा कडा नियम भएको पाईदैन । नगरपालिकालाई आम्दानीको श्रोत बृद्धि गर्नु भन्ने सुझाव राखेको छ । आफ्नो आम्दानी बढाउनु होस भन्नु कुन नराम्रो कुरा हो र ?
अर्को विर्सन नहुने कुरा के छ भने गत महिना यस योजनाका कन्सल्टयान्टले दिएको रीपोर्ट अनुसार हाल भनिन्दै आएकाृे २अर्व रुपैयाको खर्च भित्र पानी ल्याउने मात्र नभएर ठुलठुला पानीका टंकि,सडक,ढल निर्मााणका कामहरु पनि छन जसमा आधा जसो वजेट खर्च हुने भएको छ । अन्यथा पानी मात्र संकलन गर्न त ८० करोडले नै पुग्ने देखिन्छ । यदि क्रण घटाउने हो भने यी काम हरु नगर्दा पनि हुने प्राविधिकहरुले भनि सकेका छन । दश पन्ध्र वर्ष अधि सम्म नेपालमा प्राविधीकहरुको अभाव र क्षमता नभएकोले कन्सल्टेन्ट, ठूला ठेकेदारहरु सबै विदेशबाट ल्याउन बाध्य थियो । तर अहिले त्यो स्थिति छैन् । धरानकै परियोजनामा पनि नेपाल कै सबै भन्दा ठूलो बिडिए नामक कन्सलटेन्टले काम गर्दैछ सबै नेपालीहरु भएको नेपाल कै एउटा कम्पनि आएर जंगलबाट डिलिङ्ग गरेर पानी निकालि दियो । एउटा आईआरडिसी भन्ने नेपाल कै गैर सरकारी संस्थाले सामाजिक विकासको काम गर्दैछ । अब बन्ने बोर्ड समितीमा पनि नेपाल सरकारले बनाएको विधान अनुरुप नै गठन हुनेछ भने पानीमा लगाईने शुल्क पनि हाल खानेपानी संस्थानले बनाएको नियम अनुसार नै लिने हो । बार्डले आफ्नो मन खुशी शुल्क तोक्ने अधिकार छैन् । फेरी एडिबी ले धरानमा मात्र यस्तो परियोजना संचालन गरेको होईन अधिराज्यको सबै नगरपालिकामा एकिकृत शहरी विकास परियोजना अन्र्तगत सहयोग पु¥याउदै आएको छ ।
खानेपानी संस्थानको दादागिरी
यती वेला धरान ४ स्थित खानेपानी संस्थान धर।नको कार्यालयको मुल द्दारमा नै चार वटा कर्मचारी संगठनको नाममा एउटा कालो व्यानर मा खानेपानी संस्थान धरानवाट खारेज गर्न पाईंन्दैन भन्ने जस्ता नारा लेखिएको तुल टागेको देखिन्छ । त्यहाका पानी हाकिम दिपक श्रेष्ठ लगाएत केहि कर्मचारीहरु धरानमा एडिवीको प्रवेश वाट खुसी छैनन । आफुले राईदाई गिर्दै आएको स्थानमा अरु कोहि हस्तक्षेप गर्न आउदा कस्लाई पो खुसी लाग्लार ? वरु हालै मात्र हाकिम श्रेष्ठको निर्देशनमा सुनियोजितरुपमा नै एडिवीको योजना चाहिन्दैन भन्ने व्यहोराको निवेदन वनाएर ३४६६ जना नगरवासीको किर्ते नाम नम्वर र हस्ताक्षर वनाएर शहरी विकाश मन्त्री डा नारायण खडका एडिवी , नगर पालिका लाई विरोज्ञ पत्र वुझाएका रहेछन । जुन हस्ताक्षर संकलन गर्न उनले आफना पलम्वर मिटर रिडर र जनसरोकार मन्चका मान्छेहरुको पनि सहयोग लिईरहेको पाईन्छ । यो पतिmकारलाई एडिवीको कार्यालयवाट प्राप्त सो निवेदनमा धेरै वर्ष अधि स्वर्गारोहण भईसक्नु भएका वार्ड नं ५ नीवासी प्रसिद्ध समाजसेवी भगवान थापा, लक्ष्मी हलुवाई, वार्ड नं १२ का फणिन्द्र ढकाल जस्ता मानिसहरुकाृे पनि नाम र किर्ते हस्ताक्षर पनि समावेश भएको देखेर दंग परीएको थियो ।
एउटा अच्चमको सस्था जस्ले जनतालाई न प्रसस्त पानी खुवाएन सकेको छ न भविष्यमा खुवाउने कुनै योजना नै छ त्यस्तो संस्थालृे अरुलाई सौता देख्नुको रहस्य के हो ? के भ्रष्टचार, अनियमितताको भाडा फुटला भनेर त्रसित भएका त होईनन नत्र भने एउटा राष्ट सेवक कर्मचारीलाई आफनै मन्त्रालयले सम्झौता गरी पठाएको एडिवी परीयोजना चाहिन्दैन भन्ने हिम्मत कहा वाट आयो ? के खानेपानी संस्थान राजनीति गर्ने अखडा हो ? संस्थान भनेको जनताको हित हेर्न वनाएको कि भ्रष्ट कर्मचारी पाल्न पोस्न ?े हित गर्न हो भने धरान खानेपानी संस्थानले खै पानीको समस्या समाधान गर्न सकेको ? अहिले वर्षायाममा पनि प्रसस्त पानी दिन नसक्नेले किन अर्को परीयोजना विरुद्द षडयन्त्र गरीरहेको यो वुझि नसक्नुको प्रश्न भएको छ ?
खानेपानी संस्थान भित्र चरम भ्रष्टचार हुन थाले पछि एडिवी विश्व वैक जस्ता सहयोगी दाताहरुले क्रण अनुदान दिन वन्द गरेको झण्डै १५ वर्ष भयो । यदि खानेपानीमा क्रण अनुदान दिनु पर्छ भने जनताको प्रतिनिधी रहेको खानेपानी वोर्ड गठन गरेर मात्र दिन छौ भनि तत्कालिन गिरीजा प्रसाद कोईरालाको सरकार समक्ष प्रस्ताव राखे पछि वाध्य भएर सरकारले एउटा विधेयक वनाएर अधिराज्य भरी लागु गरेको थियो । जस्को पहिलो कार्यान्वयन काठमाण्डौ उपत्यका वाट शुरु भएको हो । त्यस पछि हेटौडा चितवन हुदै अहिले धरान सम्म आईपुगेको छ । यि सवै स्थानमा खानेपानीका कर्मचारीहरुले सजिलै हस्तान्तरण चाहि गरेका छैनन । हेटौडामा पनि २ वर्ष आलटाल गरे पछि स्थानिय जनता र राजनितिक पार्टिहले नै हडताल जुृलुस । चक्काजाम गरेर खानेपान्ँी सस्थान लाइ छाडन वाध्य पारेको तितो अनुभव छ ।
अहिले धरानमा पनि हेटौडाकै केहि कर्मचारीहरु आएर यहा कर्मचारी उचाल्ने काम भईरहेको वताईन्छ । धरानमा पनि पाईप खरीद, टंकि निर्माण ,कर्मचारी भर्नामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको कर्मचारीहरु नै वताउछन । जंगलका ५ वटा पम्पमा जेनेरेटर चलाउदा लाग्ने डिजेलको विल, अनि मर्मत खर्च वढि देखाएर भ्रष्टचार गरीने कुरा सामान्य कुरा भएको त्यहाका साना कर्मचारीहरु वताउछन । ५० जना कर्मचारीले पुग्ने शाखामा १०० जना कर्मचारी पालेका छन । जो मन्त्री, हाकिम, नेताहरुको सोर्सफोर्स वाट आएका छन । हरेक वर्ष सर्दुृको भेलले ईन्टेक र पाईपहरु वगाउछन । अनि आकष्मिक खर्चको नाममा हाकिमहरुले लाखौ रुपैया कुमल्याउने गरेको तथ्य स्थानिय पत्रपत्रिकाहरुले वारम्वार लेख्दै आएका छन । सर्दृूु जलाधारको पानी वेचेर वार्षिक २ करोड रुपैया केन्द्रमा पठाउने खानेपानी संस्थानले जलाधार सरक्षणमा पांच पैसा खर्च नगर्नुले उनीहरुको नीति कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको गाईजात्रे काम
धरानको विकाशमा नगरवासीको महत्वपुण सहभागिता छ तर राज्यको सहयोग जुटाउने कुरामा भने यहाका राजनितिक दल र नेताहरु सक्षम छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । आपसी झै झगडा कारण यहा वसपार्क,एयरपोर्ट,सपिडकम्पेल्स जस्ता विकाशे काम वन्न सकेको छैन । राजनितिक एकता कै कारण हिजोका गाविस ईटहरी आज उपमहानगर पालिका वन्ने दौडमा छ भने धरानकै सर्वाडिण विकाश हुने खानेपानीको परीयोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा आई पुग्दा केहि जिम्मेवार राजानीतिक पार्टिका व्यतिmहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी वतmव्य वाजी गर्नु ले यहा नगरवासीिहरु अलमलमा पर्न थालेका छन । नेपाली कांगे्रस धरान नगर समितिले धरानवासीको लागी दिर्धकालिन पानीको समस्या समाधान गर्ने आएको एडिवीको परीयोजना सफल पार्न सवै नगरवासीलाई आव्हान गर्र्देै चुनावताका श्वेत पत्र नै जारी गरेको छ थियो । तर सोहि पार्टिकोसुनसरी क्षेत्र नं १ ले भने हालै एक पत्रकार सम्मेलन गरी लौ त यो परीयोजना कसरी आउदो रहेछ हेर्रौ , भन्ने खालको विज्ञप्ती निकालेर जंगलको होईन चतराकै पानी ल्याउनु पर्ने अन्यथा आन्दोलन गर्ने धम्की दिन पनि भ्याएको छ । एउटै काग्रेस पार्टिको दुईटा धारणा आउछ भने यो भन्दा गाईजात्रा अरु के हुन सक्छर ? अनि यस्ता गैरजिम्मेवारपार्टिहरुले नगर लाई कता पुर्याउला चिन्ताको विषय वनेको छ ।
धरानमा एडिवीको खानेपानी योजना ल्याउन नेकपा माओवादि पार्टि वैध समुहका केन्द्रय सदस्य तथा पुर्व सभासद किरण कुमार राईको भुमीका ज्यादै महत्वपुर्ण थियो.। पानीको समस्या समाधान गर्न भनि उनले धेरै पसिना वगाएका थिए तर अहिले परीयोजना आए पछि उनैको पार्टिका धरान नगर ईन्चार्जको नाममा एडिवी परीयोजनाको धोर विरोध गर्दै यदि परीयोजना अधि वडाएमा जे पनि हुन सक्ने जस्ता धम्कीपुण वतmव्य छाप्न लगाएर अर्को गाईजात्रा देखाएका छन ।
अहिले एडिवीको सहयोगमा विराटनगरमा ढल निकासको लागी ३ अर्व रुपैयाको परीयोजना को काम धमाधम शुरु भएको छ । ईलाम, धनकुटा , दमक जनकपुरमा पनि सोहि प्रकृतिका योजनाहरु द्ुत गतिमा भईरहेको समाचार सुनिनछ तर धरानमा भने पानीको योजनाको वारेमा जनताले राम्ररी थाहा पाउन सकेन भन्ने गुनासो आई रहन्दा पनि यहाका परीयोजना संचालकहरुले एउटा पर्चा निकाल्न सकेको छैन । कतै सुचना वोर्ड राख्न भ्याएको छैन । सवै वार्डमा स्वतन्त्र वहस चलाउन सकेको छैन । यसैको फाईदा उठाई अहिले खानेपानी संस्थान धरानले परीयोजनाको विरोधमा पर्चा पम्प्लेट निकालि रहेको छ ।आफनो गोजी वलियो राख्नु अरुलाई दोष नदिनु भन्ने उखान जस्तै धरानको खानेपानी परीयोजना संचालक धरान नगर पािलकाका सचिव लगाएत सवै ठेकदार पार्टिले परीयोजना वारे सम्पुर्ण गतिविधिको जानकारी दिन किन ढिलाई गरी रहेका छन वुझन सकिएको छैन ।
अन्त्यमा : आर्थिक ,सामाजिक, धार्मिक ,प्रार्कतिक हिसावले धरान सुन्दर शहर भन्दा भन्र्दै पनि पानीको अभावको कारण यी सवै सुन्दरतामा दाग लागेको छ । हाम्रो शहर भित्र पानी प्रसस्त रहेका कुरा विज्ञहरुले निकालेर पुष्टि पनि गरीदिई सकेको छ । तर अव त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल मात्र वाकि रहेको वेला प्राविधिकको सल्लाह, दाताहरुकोसहयोगलाई नजर अन्दाज गर्र्दे स साना कुरामा विवाद खडा गर्नुले अन्तत हाम्रो विकाशको गतिलाई अवरुद्ध पार्नु हो भन्ने कुरा सवैले वुझन वान्छनिय छ ।